Su’aal adag: Nimca Dareen xubin ka tirsan DDSI mise Fannaanad? - iftineducation.com
iftineducation.com – Akhristayaal fara badan oo ku tixan majalada iftineducation.com ayaa su’aallo dhowr ah naga soo weydiiyay fannaanada aan dhicin ee Nimca Dareen oo mudooyinkii u danbeeyay ku laalaabaneysay xarunta DDSI ee Jigjiga oo ah hoyga dhaantada.
Su’aallaha ugu badan ee akhristayaasheena ka keeneen socdaalka fannaanada Nimca Dareen ayaa marka si dhab ah loo caddeeyo ama u shaacina ah “Nimca Dareen ma xubin ka tirsan DDSI mise Fannaanad fankeeda si weyn looga xiiseeyo Jigjiga?.
laga hadlo dhalasho ahaan Nimca Dareen waxay kasoo jeedaa dhulka DDSI, wax macno ahna kuma dhisna haddii ay xili walba booqado gurigeeda, waa sida bahda iftin ay aaminsan yihiin, wax xiriir wada shaqeyn ahna uusan ka dhaxeyn maamulka DDSI iyo fannaanada.
dad badan ayaa aaminsan ama xanta suuqa ku jirta ah in fannaanada ay wada shaqeyn hoose la leedahay maamulka uu hoggaamiyo Cabdi Muxumad oo ah Madaxweynaha DDSI, dhaqaale aan la cayimana bil walba ay ku leedahay hay’addaha sirdoonka.
Soomaali Khasaare Kasoo Gaaray Dab Ka Kacay Canada